Puzzles mahatsapa ho an'ny ankizy | Asa tanana
Mahatsiaro piozila ho an'ny ankizy
Tony Torres | 26/09/2021 23:19 | Asa tanana nahatsapa
Puzzles dia iray amin'ireo lalao tsara indrindra ho an'ny ankizy, hatramin'ny faralahy ka hatrany amin'ireo manana fahasamihafana miasa. Misy karazana piozila ary samy manana valiny lehibe izy rehetra, arakaraka ny toetran'ny ankizy.
Etsy ankilany, ny lalao amin'ny lamba toy ny tsapa dia tonga lafatra amin'ny fiasana amin'ny saina sy ny fahaizan'ny moto. Inona no mahatonga ity piozila tsapa ity ho kilalao lavorary ho an'ny ankizy kely hampivelatra ny fahaizany rehetra. Samy sensory na ara-batana na ara-tsaina. Ho fanampin'izay, mora ny manao sy Azonao atao ny mamorona karazan-tarehimarika rehetra mba hampiasaina sy hankafizan'ny zanakao kely.
1 Ahoana ny fomba hamoronana piozila tsapa tsikelikely
1.1 Safidio ny endrika hamoronana ilay piozila
Ahoana ny fomba hamoronana piozila tsapa tsikelikely
Mba hamoronana an'ity piozila tsapa ity ilainay ireto fitaovana manaraka ireto:
Lamba nahatsiaro pied
tari-dresaka manisy peta-kofehy
Ravina iray an'ny taratasy
Safidio ny endrika hamoronana ilay piozila
Hosoratanay voalohany amin'ny taratasy ilay sary voafantina, amin'ity tranga ity dia baolina miloko. Notapahinay ireo faritra samihafa hitondrana ilay tsapa.
Mampiasa ny bobongolo izahay mba hamoronana ireo sombin-javatra amin'ny lamba tsapa, samy hafa loko samy hafa. Ho an'ny fototra nanapaka ny tsapan'ny 30 by 30 toradroa izahay santimetatra.
Ankehitriny dia hampiasa isika ny kofehy volafotsy hamoronana zaitra kely eo amin'ny sisin'ny faritry ny piozila, ka ho tsara tarehy kokoa izy ireo.
Mba hamoronana ny endriky ny piozila eo am-potony, handeha izahay apetraho ireo lasitra taratasy ary soromy amin'ny lamba. Miaraka amin'ny kofehy amboradara dia manintona tsirairay ireo singa izahay, amin'ny fampiasana loko isan-karazany. Farany, nametraka velcro adhesive vitsivitsy izahay mba hahafahana manatevin-daharana ireo sombin-tsolika.
Ankehitriny isika dia tsy maintsy mametraka ny ampahany hafa amin'ny velcro adhesive amin'ny sombintsombin'ny piozila hahafahana manatevin-daharana azy ireo amin'ny fototra ary isa feno izy io.
Ary toy izao ny endrik'ireo piozila mahatsapa ity ahafahanao miasa ny lokony, ny fahaizanao moto, ny fifantohana na ny fahatsapan'ny zanakao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Asa tanana » Asa-tanana sy fitaovana » Asa tanana nahatsapa » Mahatsiaro piozila ho an'ny ankizy
Biby 5 hatao amin'ireo ankizy kely ao an-trano
Hevitra fanaingoana DIY ho an'ny efitrano fandriana